Iwo gumi akanakisa esarudzo mitambo ye iPhone | IPhone nhau
Iyo gumi yakanakisa nzira mitambo ye iPhone
Cristina Torres chinobata mufananidzo | | IPhone mitambo
Mune iyo iPhone pasirese, mitambo ine basa rinowedzera kukosha. Muchokwadi, hapana mashoma emakambani emitambo yemavhidhiyo ari kudzidza maitiro ekutanga mune ye smartphone chikamu nezvose zvinodiwa izvo zvirikuitika munharaunda iyoyo. Asi chaizvo, kunyangwe muApp Store tichiwana zvinopihwa zvemarudzi ese, imwe yeiyo inokwezva zvakanyanya ndeyeyeyeyekisheni yemitambo chikamu, uye ndizvo chaizvo izvo zvatichazotaura zvinotevera nekuti nhasi tinoratidza chii chingave chiri 10 akanakisa esarudzo mitambo ye iPhone.
Zvimwe zve izvo zvauri kuzoona mune yedu inotevera zvinyorwa ndezve izvo zvauchatoziva kare, nekuti zvinobva pane akanyanya kurodha pasi zvinyorwa. Zvimwe zvinogona kunge zvisina kukodzera kwauri, asi zvimwe nekuti zvine zviyero zvakanaka kwazvo, kana nekuti vazhinji vashandisi vanokurudzirwa kurodha pasi, kana nekuti izvo zvatsva zvabuda zvave nemhinduro dzakanaka kwazvo mumusika we Strategy mitambo ye iPhone kubva kuApp Store. Saka kana iwe uchida kupa yako runyorwa kugadziridzwa zvishoma, cherekedza zvinotevera izvo zvinogona kuperekedza runyorwa rwe mitambo yakanakisa paApp Store.
1 Strategy mitambo ye iPhone
1.1 Autumn Dzinza Vatongi
1.2 Kingdom Rush kumiganhu
1.4 Anomaly 2
1.6 Gweta raDhiyabhorosi
1.7 Plants vs. Zombies 2
1.8 Civilization Revolution 2
1.9 Kutanga Kutanga
1.10 Dambudziko Inc.
Strategy mitambo ye iPhone
Autumn Dzinza Vatongi
Kana iwe uri mumwe wevaya vanoda mitambo mauri kudzora maguta ese, uye ukatarisana nebudiriro, iyi yaunofanirwa kuyedza. Zvichienderana nemaChinese madzimambo, haugone kungokura sevanhu, kana kutonga zvese zvinosanganisira kuve chikamu chehumwe humambo hukuru, asi zvakare kutarisana nevavengi vako uye seta iyo mitemo yekudyidzana.
Kingdom Rush kumiganhu
Kana usati wakambozviedza, pamwe nzira yakanakisa yekuitsanangura iri nekurangarira Shongwe yekudziviriraKunyangwe mune ino kesi zviitiko, vavengi uye kunyanya chiito, shanduko shomanana dzinoitwa kuita kuti hondo dzive dzakanyanyisa. Iyo giraidhi chikamu ndeimwe yeakanakisa uye ini ndinofunga zvakaoma kunetseka.
Kana paine imwe yeedu runyorwa rwe 10 nzira mitambo ye iPhone nhasi izvo zvinotora pfungwa, chokwadi ndechekuti ichi chichava zita rakasarudzwa. Iyo inosiya zvese zvinozivikanwa uye yayo diki minimalist nemabatiro eakanyanya puzzle inoshevedza vazhinji kuyedza zvimiro zvitsva zvinopfuura kupfuura zvekare.
Vanodaro zvikamu zvechipiri hazvina kumbove zvakanaka, asi panogara paine chisaruro chinoratidza mutemo, uye nyaya yepakutanga mune iyi kesi inochengetedzwa, asi nekuvandudzwa kwemifananidzo, zviri pachena kuti zvinogona kutora vateereri vekare nevatsva.
Pamwe imwe yeayo mashoma ayo anofanirwa kukurudzirwa chete pane mamwe mazera. Kana iwe uchida kupfura, mitambo yekuita uye iwe uri pachena kuti mamiriro akakwana ndeapo pane zvombo, ndinofunga unofanirwa kuzviedza pasina kupokana. Ehezve, haina kukodzera kune ese mabhajeti, zvirinani kwete izvo zvatakajaira muApp Store.
Kana iwe uchifunga izvo mitemo inofinhaGadzirira kugara segweta rinotanga kubva pakutanga uye rinowana mukurumbira uye hupfumi nekuda kwekugadzirisa kesi uye kushandisa matekiniki ekuwedzeredza ekushambadzira. Kushongedza hofisi, kubheja pamatare matsva, kana kudzivirira yako nezvombo zvakasiyana siyana chichava chinangwa chako. Uri kuenda kuzorasikirwa nekuzviedza here?
Ini ndinofunga kuti mune ino chaiyo kesi kune zvakawanda zve tsamba. Ichokwadi ndechekuti ndeimwe yeanonyanyo kuzivikanwa uye anotorwa pasi uye izvo zvinowanzo gadziridzwa pamwe nekusununguka kurodha kushambadzira zvinoita zvakanyanya mupfungwa yekuramba uchisimudzira.
Zvekare tinodzokera kupfungwa ye budiriro, kunyangwe mune ino nyaya zita rakazara zvekuti chinangwa chekupedzisira ndechekuti chako uwane kubwinya munzvimbo dzese. Uchibatsirwa nediplomacy unofanirwa kuzadzisa zvakanakisa musainzi, tsika nemagariro, chinamato nehunyanzvi hwemauto
Mune iyi nyaya danho rakaenzana pasirese, kunyangwe izvo zvinofanirwa kuitwa zviri chaizvo kutsvaga hutongi hwenyukireya pasirese pasirese. Ichokwadi ndechekuti inoshamisika nepfungwa yayo yakapusa, asi muchokwadi inokunda vashandisi vazhinji. Kana iwe uchida kuyedza iyo yekutonga pasirese, pamwe kurodha pasi kwezita iri ndiko kwakanyanya kukurudzirwa.
Kunyangwe chiri chikamu che zano zvakaipa zvakaipa, Chokwadi ndechekuti kutapurira nyika nezvipukanana zvinoita kunge kuri kubudirira pa iPhone, uye ndizvo chaizvo izvo chikumbiro ichi nemutengo wakaderera weApp Store.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Iyo gumi yakanakisa nzira mitambo ye iPhone
Zvirimwa vs Zombies 2 inogadziridzwa nematunhu matsva
Tora Gay, yakasarudzika "Tinder" yenharaunda yevanhurume